छा’लाको रुखोपन तथा दा’गधब्बा हटाउन प्रयोग गर्नुहो’स् गु’लाब जल - Nawalpur Dainik
छा’लाको रुखोपन तथा दा’गधब्बा हटाउन प्रयोग गर्नुहो’स् गु’लाब जल
खासगरी सौन्दर्य बढाउनका लागि गुलाब निकै उपयोगी सावित भइसकेको छ। गुलाबको जल बनाएर अनुहार तथा केसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले छालाको पीएचको स्तर पनि ठीक राख्छ। छालालाई सफा गर्नका लागि गुलाब जल उपयोगी हुन्छ।
गुलाबको फूल विभिन्न रंगको हुन्छ, जसलाई सजावट, कस्मेटिक उत्पादनदेखि औषधी बनाउन सम्म प्रयोग गरिन्छ।
यस्ता छन् गुलाब जलका फाइदा:
– छालालाई नरम बनाउँछ।
– रुखो हुन दिदैन।
– छालामा दाग,धब्बा हुन दिदैन।
– आँखाको तलको कालो घेरा हटाइदिन्छ।
– तैलिया छालामा पनि यो लाभदायक हुन्छ।
– छालालाई हाइड्रेड राख्छ।
नु’हाउनासाथ नगर्नुहोस् यी पाँच ग’ल्ती, नत्र झ’र्न थाल्छ तपाईंको क’पाल : हा’मीमध्ये अधिकांशलाई क’पाल झर्ने स’मस्या हुन्छ । यस्तो स’मस्या विभिन्न कारणले हुन्छ । कसैको कपाललाई पो’षणको कमि हुँदा यस्तो स’मस्या आउँछ भने कतिले आफ्नै लापारवाहीले यो स’मस्या जन्माउँछन् । कपाल नुहाएपछि हामीले गर्दै आइरहेका केही दैनिक अभ्यासले हाम्रो कपाल झर्ने समस्या उत्पन्न गराउँछ । यी हुन् पाँच गल्तीहरु छन् जसले कपाल झर्ने स’मस्या निम्त्याउँछ । नुहाएपछि चिसो क’पाललाई कहिल्यै मालिस गर्नु हुँदैन । कपाल धोएपछि जराहरु ओसिलो र कमजोर भएका हुन्छन् । त्यस्तो समयमा मालिस गर्दा कपाल अत्याधिक झर्छ । चिसो कपाललाई कोर्ने बानी पनि छोड्नुपर्छ । चिसो कपाल कोर्दा कपाल झर्छ ।
चिसो कपालमा हेयर स्टाइलिङ मेसिनहरुको अत्याधिक प्रयोग गर्नु हुँदैन । चिसो कपालमा ड्रायर वा स्ट्रेटनिङ मेसिन प्रयोग गर्दा कपाल झर्ने मस्या उत्पन्न हुन्छ । चिसो कपालाई बाँध्नु हुँदैन। कपाल बाँधेमा लामो समयसम्म ओसिलो रहन्छ। त्यसले कपालको जरामा संक्रमण गर्नुका साथै चायाँको स’मस्या बढाउँछ । टाउको नुहाएपछि कहिले तुरुन्त बाहिर जानु हुँदैन । वातावरणमा घुमिरहेका धुलाका कण र फोहोरहरु कपालमा टाँसिन आउँछन् र चायाँको स’मस्या उत्पन्न गराउँछन् । यसले पनि कपाल अत्यधिक झार्छ । याे जानकारी पनि पढ्नुहाेस् !
कि’न पर्छ टाउँकोमा जु’म्रा ? यसबाट सधैँका लागि छु’टकारा पाउन अपनाउनुहोस् यी उ’पाय: मानिसको श’रीरमा तीन प्रकारको जुम्रा पर्ने गर्छ । कपाल, जिउ तथा गु’प्तांगमा फरक फरक प्रकारका जुम्रा पर्छ । मानिसले जुम्रा परेपछि जिउ तथा टाउको चिलाएर अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी, महिलाको क’पाल लामो र बाक्लो हुने कारण जु’म्राको स’मस्या धेरै हुन सक्छ । जुम्रा पर्ने स’मस्या र त्यसबाट बच्ने उपायबारे छालारोग विशेषज्ञ सविना भट्टराईका सुझाब यस्ता छन्ः
बाक्लो कपालमा बस्न मन पराउने जु’म्राले विशेष कन्पारा, गर्दनको साइडमा अस’र पुर्‍याउन सक्छ । जुम्राले टोकेर धेरै चिलाएमा या कन्याउँदा छालामा संक्रमण हुन सक्छ । जसले गर्दा कपाल गाँठो पर्ने, घाउ हुने तथा गनाउने स’मस्या हुन सक्छ । लिखा क’पालको जरामा टाँसिएको छ भने संक्रमण भएको मान्नुपर्छ । कपालको तल–तल आएको लिखा पुरानो संक्रमण हो । यसले छा’लालाई बढी असर पुर्‍याउन सक्छ । मानिसको कपालमा परेको जुम्राबाट छुटकारा पाउने औषधि बजारमा पाइन्छ । सो औ’षधिलाई साप्ताहिक रूपमा कपालमा लगाउँदा धेरै फाइदा गर्छ । कपालमा जुम्राको औषधि सुक्खा भएको वेला लगाउनुपर्छ । कपालमा औषधि लगाएपछि आधा घन्टा सुकाएर नुहाएको खण्डमा जुम्रा नष्ट हुन्छ । सामान्यतया केटीहरूको कपाल लामो र केटाहरूको छोटो हुन्छ । त्यसैले केटीहरूलाई जुम्राले बढी सताउने गरेको पाइन्छ ।
जुम्रा एक प्रकारको परजीवी हो, जो सजिलै एकबाट अरूमा सर्छ । परिवारमा कसैलाई जुम्रा परेको छ भने अन्यलाई पनि सर्न सक्छ । त्यसैले एकै दिन सम्पूर्ण परिवारले उपचार गर्नु राम्रो हुन्छ । औ’षधिको प्रयोगले जुम्रा नष्ट भए पनि लिखा नुहाएर जाँदैन । त्यसैले बाँसको काँइयो या हातकै माध्यमले फाल्नुपर्ने हुन्छ । मानिसको शरीरमा भने नियमित रूपमा लामो समय एउटै कपडा प्रयोग गर्दा जुम्रा पर्न सक्छ । लुगाभन्दा बाहिर जुम्रा नबस्ने भएका कारण सं’क्रमितले आफूले लगाएको लुगा नै फाल्नु उपयुक्त मानिन्छ ।
Prevफागुन ०२ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
Nextश’रीरको तौ’ल घटाउन चा’हनुहुन्छ ? यी उ’पाय अपनाउनुहोस् यी उपा’य